Burco oo Bandow ku waabariisatay, iyo xaalada magaaladaas oo saaka degen – SBC
Burco oo Bandow ku waabariisatay, iyo xaalada magaaladaas oo saaka degen
Xaalada Magaalada Burco Xarunta gobolka Togdheer ee gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya ayaa saaka degen ka dib Banaan baxyo rabshado wadatay oo maalin nimadii shalay ka dhacay halkaas.
Wararka ka imanaya saaka Burco waxa ay sheegayaan in xaaladu degentahay, aysana jirin wax banaan bax iyo rabshado ah oo ka socda, waxaana dib u shaqeynaya dhaq dhaqaaqyadii dadka iyo gaadiidka magaalada.
Habeen nimadii xalay ayaa Magaalada Bandow waxaa lagu soo rogay bandow ka bilaabanayay Maqribkii , waxaana saaka lagu daadiyay magaalada ciidan aad u tirobadan oo quryaha fud fudud ku hubeysan, waxayna ka hortagayaan Banaan bax laga cabsi qabo in uu bilowdo maalintii labad.
Dadweyne ka careysan Amaro maamulka gobolka uu u qaaday dhanka gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha magaalada ayaa isugu soo baxay magaalada bartamaheeda, waxaana ka dib isu soo baxaasi uu isku bedelay mudaaharaad rabshadowatay oo ay ka dhasheen khasaare nafeed dhimasho iyo dhawacba leh.
Halqof ayaa ku dhintay mudaarahaadkii shalay dhacay , ka dib markii ciidamada amaanku rasaas huwiyeen dadkii isusoo baxay qofkaasi dhintayna waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah.
Laamaha Amaanka iyo Maamulka gobolka ayaa ka hadlay dhacdadaas waxayna shacabka habeennimadii xalay qalabka warbaahinta u mariyeen in ay isdejiyaan, ayna ku jiraan baaris dhacdadii dilka aheyd loogaga jawaabayo.
Si kastaba ha ahaatee habeen nimadii xalay magaalada Burco waxaa gaaf wareegayay ciidan roondo ah kuwaas oo bandowga ka qeyb ahaa, waxaan ilaasaaka lagu arkayaa ciidankaas wadooyinka magaalada iyo goobaha la isugu yimaado.
SBC Imternational Burco.